Akanjo Schmidt: Volomaso misy fironana
Solomaso an'ny lehilahy
Fanangonana ny fahalavoan'ny lehilahy
Fanangonana ny fahalavoan'ny vehivavy
Bilaogy Trendy Insight
Maimaim-poana ny fandefasana na aiza na aiza any Etazonia
Sort Sort Featured Best fivarotana Alphabetically, AZ Alphabetically, Za Price, ambany ny ambony Price, ambony ny ambany Daty, antitra ny vaovao Daty, vaovao ho ela
Sunglasses, zaridaina ary bara misy zara-kazo Zebrawood, voafolaka,
Cherry Wood Frame feno, voafolaka amin'ny fantsom-by vy sy volotsangana
Sunglass tena amoron-kazo, Lasoà vita amin'ny ranomandry vita amin'ny ranomandry, vita tanana
Sunglasses amin'ny zebrawood miaraka amin'ny lantana manga sy polarized
Sunglass vita amin'ny sokatra mena vita sokitra mena miaraka amina raharaha vita amin'ny kitay vita amin'ny hazo, voafolaka,
Sunglass vita amin'ny hazo mainty sy metaly, solomaso polarized G15 miaraka amina tranga volotsangana
Sunglass polarisedra feno ny zebrawood
Sunglasses miaraka amina raharaha vita amin'ny bararata vita amin'ny Walnut Wood Club.
Sunglass, karazana milina tanana, tanana vita amin'ny tanety vita amin'ny Walnut Wood Club
Sunglass an'ny Bamboo Black Midnight amin'ny mamatonalina miaraka amin'ny Case
Sunglass volotsangana volom-boankazo misy ranom-boankazo maharikoriko amin'ny tranga
Solomaso solomaso milentika amin'ny masoandro, volon'ondry mainty misy tratrany hazo
Sunglassen hazo vita amin'ny hazo sienna miaraka amina boatina volotsangana, voaloko miloko dite
Sunglass polarized vita amin'ny Cherry Wood sy Acetate
Jase New York Royce Sunglasses any Havana
Sunglasses vita amin'ny poletazy Cherry Wood sy Acetate Miaraka amin'ny Tranga
Sunglasses an'ny Skateboard Multi-Layer Club, Lio mainty voamarina mainty
Sunglasser Skateboard Multi-Layer-Club, solomaso voafolaka, miaraka amina tranga
Masoandro fitaratra amin'ny filentehan'ny masoandro sy ny volony vita amin'ny volony mainty
Sarina miloko granite, Sunglasses an'ny volotsangana, Voaravaka amin'ny raharaha hazo
Sunglasses amin'ny zebrawood miaraka amin'ny lantia polarized manga
Regular vidiny $70.38 Mitsitsia $ -70.38
Fandefasana novaina tamin'ny fisavana.
Sunglass Premium Zebrawood and Sunglasses, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lens, Artisan vita sokitra, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglasses, Case Bambu, Pouch Microfiber maimaim-poana, lamba fanadiovana microfiber, fehy sunglass ary carte test polarization!
Sizing: Frame Sakany: 5.75 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.9 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.6 santimetatra.
Mizarazara: Ny solomaso voahodina dia manafoana na mampihena ny famirapiratana. Ny lantionay dia namboarina manokana hanolotra fiarovana 100% UVA sy UVB na dia amin'ny tarehin-jiro mahery aza. Raha tsy misy fiarovana polarized, mihena ny fahatsapana lalina, ny fomba fijery tsy mety ary ny fahitana loko, ary amin'ny tranga sasany dia mety ho jamba vetivety ianao. Ilaina ny polarization amin'ny hetsika ivelan'ny trano, anisan'izany ny fitondrana fiara, fanatanjahan-tena tafahoatra, fanatanjahantena anaty rano, ary ny jono. Ny tombotsoan'ny solomaso solomaso polarized dia tsy misy farany ary afaka mamonjy ny fahitanao!
Tanana: Ny solomaso misy solomaso Engleberts tsirairay avy dia vita amin'ny tanana vita amin'ny hazo namboarina sy vita sokitra. Noho ny tsy fitovizan'ny voam-bary, dia tsy hisy hitovy ny roa. Endri-javatra tsy manam-paharoa ianao.
UV 400 voaaro: Engleberts Sunglasses dia misy masom-piarovana UV 400. Ny solomaso voaro UV 400 dia afaka manakana taratra hazavana kely toy ny 400 nanometera. Midika izany fa na aiza na aiza amin'ny 99 ka hatramin'ny 100 isan-jaton'ny taratra manimba ny masoandro dia voatazona lavitra ny maso, izay afaka manisy fiovana lehibe amin'ny fiarovana ny maso.
Hinges amin'ny lohataona: Manome karazana fihetsiketsehana sy fampiononana bebe kokoa handraisana lohany samy hafa habe, afaka mahazaka ny fampiasana isan'andro.
9 Layer Cat 3 Lensa: Lensa Cat 3 no masinina avo indrindra azonao zahana nefa mbola mitondra fiara.
Anti-hisainana: Manatsara ny fahitana, mampihena ny fihenan'ny masonao ary manao izay hahasarika kokoa ny masonao.
Stylish: Style Vintage mahazatra izay toa tsara amin'ny olon-drehetra saingy efa fantatrao izany. Handoka teny fiderana ianao!
maivana: Ny Engleberts Premium Wood Sunglasses dia maivana noho ny plastika.
Eco-Friendly: Mandehana Green miaraka amin'ny fisorohana solomaso solomaso plastika. Engleberts Premium Sunglasses dia maharitra. Ny akondro dia sasany amin'ireo zavamaniry maniry haingana indrindra eto an-tany miaraka amin'ny karazana sasany izay nitatitra ny tahan'ny fitomboana hatramin'ny 3 metatra tao anatin'ny 24 ora. Ahitra maniry haingana ny volotsangana, tsy mila zezika sy famelon-tena avy amin'ny fakany avy, ka tsy mila averina hambolena.
Asa tsara: Hahazo dera amin'ny Sunglass Engleberts ianao, aza hadino ny mamela ireo izay midera anao hahafantatra hoe taiza no nahazoanao azy. Boom! Vita soa ny andro vita.
100% Fankasitrahana nohazonina: - Matoky ny vokatra sunglass izahay. Raha tsy tianao ny anao dia avereno izy ireo mba hamerenanao vola feno.
At Engleberts atsika kely kokoa ao anaty solomaso misy antsika noho ny hafa. Ny fananana ny tsirairay vita tanana, ny fahazoana antoka fa ny masomaso rehetra misy polarized, voaro UV 400, manana solomaso manohitra taratra ary maivana. Ho hitanao ihany koa ny solomaso ataontsika amin'ny hazo voajanahary tena izy, sariaka tontolo iainana, maharitra, vita sokitra sy kanto. Mampiasa savilin'ny lohataona vy izahay, solomaso Cat 3 ary rehefa voalaza sy vita izany dia mahazo soatoavina lehibe sy solomaso solomaso ianao izay tsy manam-paharoa toa anao.
Hofonosinay miaraka amina paosy microfiber maimaim-poana ny mpivady tsirairay, lamba fanadiovana microfiber maimaim-poana hitazomana anao ho tsara tarehy, tady sunglass maimaim-poana mba tsy hahavery ireo harem-pirenena ireo. Heck, izahay dia manipy karatra fitsapana Polarization Maimaimpoana mba hahafantaranao fa mahazo ny tena fifanarahana ianao. Ny fanampiny kely rehetra tafiditra ao amin'ny fividianana tsirairay izay manavaka anao sy izahay amin'ny hafa
Mbola tsy vita izahay, ny vadinao koa dia mirakitra tranga volotsangana fiarovana. Tsy misy fomba tsara kokoa hiarovana ny solomaso misy anao premium noho ireo tranga volotsangana vita tanana tsara tarehy ireo. Izy io dia mametaka ny fofon'ny tany ao anatiny. Ho faly amin'ny fofon'ny tany ianao. Mitondra karma tsara ho an'izay rehetra manana azy. (Fampitandremana: ny fofona ao anatiny amin'ny vatan'ny volotsangana dia mety ho fanao mahazatra).
Saraho ny masonao amin'ny Engleberts Premium Sunglass hazo!
OK ka tsy nanana ny androny tsara indrindra ny mpanao sokitra. Eo amin'ny sandrin'ny anatiny amin'ireo solomaso solosaina ireo dia voasoratra hoe Polarized. Ny lesoka dia ny tombom-barotrao. Ireto solomaso solomaso ireto dia voamarika mba hita taratra ny lesoka ary mety ho anao ny manome isa alokaloka mamy amin'ny fihenam-bidy matotra.
Engleberts Premium Cherry Wood Frame feno miaraka amin'ny solomaso vy. Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lens, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglass, Pouch Microfiber maimaim-poana, Lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, fehin-tsolomaso maimaim-poana, karatra fitsapana polarization maimaim-poana ary fandefasana maimaim-poana!
Sizing: Frame Sakany: 5.67 santimetatra - Haavon'ny endriny: 2.12 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.75 santimetatra.
Lanjan'ny polarized: Ny solomaso voahodina dia manafoana na mampihena ny famirapiratana. Ny lantionay dia namboarina manokana hanolotra fiarovana 100% UVA sy UVB na dia amin'ny tarehin-jiro mahery aza. Ny tombotsoan'ny solomaso solomaso polarized dia tsy misy farany ary afaka mamonjy ny fahitanao!
Hinges amin'ny lohataona: Ny Stainless Hinges dia manome fihetsika sy fampiononana bebe kokoa handraisana lohany samy hafa habe, ary mahatonga ny solomaso solonao ho zakan'ny fampiasana isan'andro.
Stylish: Englberts Wood sunglass dia manana fomba fiotazam-boaloboka mahazatra izay mahazo aina sy tsara amin'ny olon-drehetra, saingy efa fantatrao izany. Hankasitraka ianao!
Eco-Friendly: Mandehana Green miaraka amin'ny fisorohana solomaso solomaso plastika. Engleberts Premium Sunglasses dia maharitra. Ny akondro dia sasany amin'ireo zavamaniry maniry haingana indrindra eto an-tany miaraka amin'ny karazana sasany izay nitatitra ny tahan'ny fitomboana hatramin'ny 3 metatra tao anatin'ny 24 ora. Ny volotsangana dia tsy mila zezika sy famerenan'ny tena avy amin'ny fakany, ka tsy mila averina hambolena.
Value: Ny mpivady Engleberts tsirairay avy dia miaraka amina paosy microfiber malefaka maimaim-poana, lamba fanadiovana microfiber ary fehin-kazo solomaso.
Ny solomaso solomaso dia taratry ny masoandro ary avy eo hita taratra ny toetranao. Engleberts antony iray no nananganana azy: Mba hahatonga anao hanana endrika tena izy, tsy manam-paharoa, rad, manavaka ary tsara fotsiny.
Raha vantany vao andramanao ireo dia tsy ho azonao esorina izy ireo, mahazo aina izy ireo ary miasa.
At Engleberts atsika kely kokoa ao anaty solomaso misy antsika noho ny hafa. Ny fananana tsirairay avy amin'ny tanany, hahazoana antoka fa ny solomaso anay rehetra dia voahodina, voaro UV 400, manana lantina manohitra taratra ary maivana. Ho hitanao ihany koa ny solomaso ataontsika amin'ny hazo voajanahary tena izy, sariaka tontolo iainana, maharitra, vita sokitra sy kanto. Mampiasa savilin'ny lohataona vy izahay, solomaso Cat 3 ary rehefa voalaza sy vita izany dia mahazo soatoavina lehibe sy solomaso solomaso ianao izay tsy manam-paharoa toa anao.
Hofonosinay miaraka amina paosy microfiber maimaim-poana ny mpivady tsirairay, lamba fanadiovana microfiber maimaim-poana hitazomana tsara, tadim-baravarana solomaso maimaim-poana mba tsy hahavery ireo harem-pirenena ireo. Heck, izahay dia manipy karatra fitsapana Polarization Maimaimpoana mba hahafantaranao fa mahazo ny tena fifanarahana ianao. Ny fanampiny kely rehetra tafiditra ao amin'ny fividianana tsirairay izay manavaka anao sy izahay amin'ny hafa.
Regular vidiny $87.98 Mitsitsia $ -87.98
Engleberts Sunglasses 100% Sandalwood tena izy, Lensa polarized Ice Blue, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lens, Artisan vita sokitra, Eco-Friendly.
Ny olona tena izy dia tsy hi-style anao miaraka amin'ireto solomaso sandalwood ireto!
Ahitana: Sunglass Sandalwood, Pouch Microfiber maimaim-poana, lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, fehin-tsolomaso maimaim-poana ary karatra fitsapana polarization maimaim-poana!
Sizing: Frame Sakany: 5.5 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.5 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.5 santimetatra.
Toetoetra: Lanjan'ny polarized: Ny solomaso voahodina dia manafoana na mampihena ny famirapiratana. Ny lantionay dia namboarina manokana hanolotra fiarovana 100% UVA sy UVB na dia amin'ny tarehin-jiro mahery aza. Ny tombotsoan'ny solomaso solomaso polarized dia tsy misy farany ary afaka mamonjy ny fahitanao!
Hofonosinay miaraka amina paosy microfiber maimaim-poana ny mpivady tsirairay, lamba fanadiovana microfiber maimaim-poana hitazomana anao ho tsara tarehy, tady sunglass maimaim-poana mba tsy hahavery ireo harem-pirenena ireo. Heck, izahay dia manipy karatra fitsapana Polarization Maimaimpoana mba hahafantaranao fa mahazo ny tena fifanarahana ianao. Ny fanampiny kely rehetra tafiditra ao amin'ny fividianana tsirairay izay manavaka anao sy izahay amin'ny hafa.
Sunglasses Zebrawood miaraka amin'ny Lensa polarisedra manga sy raharaha vita amin'ny kitay vita amin'ny hazo, tànana vita amin'ny tànana, fiarovana UV 400, lantina anti-misaintsaina 3 Liozy, sariaka ara-tontolo iainana.
Ahitana: Sunglass, Case Wood, Pouch Microfiber maimaim-poana, lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, fehin-tsolomaso maimaim-poana ary karatra fitsapana polarization maimaim-poana.
Maimaim-poana ny fandefasana!
Sizing Frame Sakany: 5.75 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.9 santimetatra - Halavan'ny Tempoly: 5.75 santimetatra.
At Engleberts atsika kely kokoa ao anaty solomaso misy antsika noho ny hafa. Ny fananana ny tsirairay vita amin'ny tànana, hahazoana antoka fa ny solomasoantsika rehetra dia polarized, UV 400 voaaro, manana anti-taratra taratra ary maivana. Ho hitanao ihany koa ny solomaso ataontsika amin'ny hazo voajanahary tena izy, sariaka tontolo iainana, maharitra, voasokitra sy kanto. Mampiasa savily lohataona vy izahay, solomaso Cat 3 ary rehefa voalaza sy vita daholo izany dia mahazo soatoavina lehibe sy solomaso solomaso ianao izay tsy manam-paharoa toa anao.
Regular vidiny $65.98 Mitsitsia $ -65.98
Sunglass vita amin'ny sokatra mena, volomaso, tànana vita amin'ny tànana, UV fiarovana, fiarovana anti-reflektiva 400 lantina, sokitra vita sokitra, sariaka ara-tontolo iainana. Voasokitra Artisan
Ahitana: Sunglasses, Bambu Case, Microfiber Pouch, Microfiber lamba fanadiovana, Sunglass Straps ary Polarization Test Card.
Sizing Frame Sakany: 5.9 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.9 santimetatra - Halavan'ny Tempoly: 5.9 santimetatra.
Toetoetra: Mizarazara: Ny solomaso voahodina dia manafoana na mampihena ny famirapiratana. Ny lantionay dia namboarina manokana hanolotra fiarovana 100% UVA sy UVB na dia amin'ny tarehin-jiro mahery aza. Raha tsy misy fiarovana polarized, mihena ny fahatsapana lalina, ny fomba fijery tsy mety ary ny fahitana loko, ary amin'ny tranga sasany dia mety ho jamba vetivety ianao. Ilaina ny polarization amin'ny hetsika ivelan'ny trano, anisan'izany ny fitondrana fiara, fanatanjahan-tena tafahoatra, fanatanjahantena anaty rano, ary ny jono. Ny tombotsoan'ny solomaso solomaso polarized dia tsy misy farany ary afaka mamonjy ny fahitanao!
Regular vidiny $83.58 Mitsitsia $ -83.58
Engleberts Sunglassa vita amin'ny hazo mainty sy metaly Premium, miaraka amina tranga volotsangana. G15 Lanjom-polarized, tsangambato vita tanana, Fiarovana UV 400, lantina anti-misaintsaina 3 Liozika, sariaka ara-tontolo iainana.
Tsy mbola vita izahay, ny vadinao koa dia mirakitra tranga volotsangana fiarovana. Tsy misy fomba tsara kokoa hiarovana ny solomaso misy anao premium noho ireo tranga volotsangana vita tanana tsara tarehy ireo. Izy io dia mametaka ny fofon'ny tany ao anatiny. Ho faly amin'ny fofon'ny tany ianao. Mitondra karma tsara ho an'izay rehetra manana azy. (Fampitandremana: ny fofona ao anatiny amin'ny vatan'ny volotsangana dia mety hamorona fahazarana).
Regular vidiny $79.18 Mitsitsia $ -79.18
Raha aficionado hazo ianao dia natao ho anao ireo.
Engleberts Sunglass Frame Frame feno 100% Zebrawood, L lens polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective, CAT 3 Lens ary Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglass, Pouch Microfiber maimaim-poana, Lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, tady sunglass maimaim-poana ary karatra fitsapana polarization maimaim-poana.
Sizing: Frame Sakany: 5.75 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.8 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.7 santimetatra.
Sunglasses Style Style Engleberts Premium Walnut Wood Club, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lens, Artisan vita sokitra, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglasses, Bambu Case, Microfiber Pouch, lamba manadio microfiber matevina, strap Sunglass ary carte test polarization.
Sizing: Frame Sakany: 5.25 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.75 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.5 santimetatra.
Alao an-tsaina ny fahaizan'ny NASA, TESLA, MIT ary BMW ampiharina amin'ny solomaso solomaso ihany, ary avy eo ampitomboina amin'ny 5 - hanana Englberts Premium Sunglass ianao.
Regular vidiny $56.32 Mitsitsia $ -56.32
Angleberts Premium Walnut Wood Club Sunglasses, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lens, Artisan vita sokitra, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglass, Pouch Microfiber, lamba fanadiovana microfiber matevina, strap Sunglass ary carte de test polarization gratuit.
Sunglasses an'ny volon'ondry mainty afovoan'alina amin'ny alim-baravarana, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective, Cat 3 Lens, Artisan Engraved, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglass, Case Bamboo, Pouch Microfiber maimaim-poana, lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, fehin-tsolomaso maimaim-poana ary karatra fitiliana polarization maimaim-poana!
Regular vidiny $68.18 Mitsitsia $ -68.18
Sunglasses an'ny volotsangana maroloko misy voankazo marokoroko, voahosotra, voaroy tanana, UV 400 fiarovana, anti-reflektiva saka 3 lantina, voasokitra mpanakanto, sariaka amin'ny tontolo iainana.
Sizing: Frame Sakany: 5.9 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.9 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.9 santimetatra.
Hofonosinay miaraka amina paosy microfiber maimaim-poana ny mpivady tsirairay, lamba fanadiovana microfiber maimaim-poana hitazomana anao ho tsara tarehy, tady sunglass maimaim-poana mba tsy hahavery ireo harem-pirenena ireo. Heck, izahay dia manipy karatra fitsapana Polarization Maimaimpoana mba hahafantaranao fa mahazo ny tena fifanarahana ianao. Ny fanampiny kely rehetra tafiditra ao amin'ny fividianana tsirairay izay manavaka anao sy izahay amin'ny hafa,
Mbola tsy vita izahay, ny vadinao koa dia mirakitra tranga volotsangana fiarovana. Tsy misy fomba tsara kokoa hiarovana ny solomaso misy anao premium noho ireo tranga volotsangana vita tanana tsara tarehy ireo. Izy io dia mametaka ny fofon'ny tany ao anatiny. Ho faly amin'ny fofon'ny tany ianao. Mitondra karma tsara ho an'izay rehetra manana azy.
Regular vidiny $72.58 Mitsitsia $ -72.58
Sunglasses an'ny volon'ondry mainty afovoan'alina miaraka amina casse, lantiro filentika mipetaka amin'ny masoandro, tànana vita tanana, fiarovana UV 400, fanoherana ny fisaintsainana, lantina 3 cat, sokitra vita amin'ny kanto, sariaka ara-tontolo iainana.
Ahitana: Sunglasses, Case Bambu, Pouch Microfiber maimaim-poana, lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, fehin-tsolomaso maimaim-poana, karatra fitiliana polarization maimaim-poana!
Sizing: Frame Sakany: 5.5 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.75 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.5 santimetatra.
Regular vidiny $80.96 Mitsitsia $ -80.96
Sunglass Bamboo Premium Ebony Bleleberts miaraka amin'ny lantom-bolo polarized brown, tànana vita tanana, fiarovana UV 400, lantina anti-misaintsaina 3, sary sokitra vita sokitra, sariaka ara-tontolo iainana.
Ahitana: Sunglasses, Bambu Case, Microfiber Pouch maimaim-poana, lamba fanadiovana microfiber maimaim-poana, tady sunglass maimaim-poana, karatra fitsapana polarization maimaim-poana.
Sizing: Frame Sakany: 5.5 santimetatra - Haavon'ny endriny: 2 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.5 santimetatra.
Tsy mbola vita izahay, ny vadinao koa dia mirakitra tranga volotsangana fiarovana. Tsy misy fomba tsara kokoa hiarovana ny solomaso misy anao premium noho ireo tranga volotsangana vita tanana tsara tarehy ireo. Izy io dia mametaka ny fofon'ny tany ao anatiny. Ho faly amin'ny fofon'ny tany ianao. Mitondra karma tsara ho an'izay rehetra manana azy.
Regular vidiny $61.58 Mitsitsia $ -61.58
Sunglass polarized Cherry Wood sy Acetate, tànana vita amin'ny tanana, fiarovana UV 400, anti-Reflective Cat 3 lens, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglass, Pouch Microfiber maimaim-poana, lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, tady sunglass maimaim-poana ary karatra fitsapana polarization maimaim-poana!
Acetate dia plastika tsy misy alikaola vita amin'ny zavamaniry. Tsy toy ny plastika miorina amin'ny solika, ny plastika acetate dia sariaka amin'ny tontolo iainana satria vita amin'ny akora azo havaozina voajanahary izay simba rehefa mandeha ny fotoana.
Tanana: Ny solomaso misy solomaso Engleberts tsirairay avy dia vita amin'ny tanana vita amin'ny hazo namboarina sy vita sokitra. Noho ny tsy fitovizan'ny voam-bary, dia tsy hisy hitovy ny roa. Inona no mampiavaka anao.
Ny solomaso solomaso Jase New York Royce dia misy endriny mahitsizoro miaraka amin'ireo tempolin'ny hazo fijaliana vy izay mamirapiratra sy manome taratra ny hazavana. Natao hanahaka teknika kanto ampiasaina hamoronana vokatra tonal izy ireo amin'ny alàlan'ny fanoratana ireo tsipika mifanila mifanila aminy. Apetraho amin'ny tavanao ireo ary azonao antoka fa hamiratra tsara ianao.
(Lens) / (Tetezana) / (tempoly)
Regular vidiny $75.88 Mitsitsia $ -75.88
Sunglasses vita amin'ny volom-boasary Cherry Wood sy Acetate miaraka amina tranga volotsangana. HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lenses, Eco-Friendly.
Regular vidiny $92.38 Mitsitsia $ -92.38
Sunglass Multi-Layer Wood Skateboard 100%, Lens Black Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective ary CAT 3 Lens, Artisan Engraved, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglass, Pouch Microfiber maimaim-poana, Lamba fanadiovana mikrofiber maimaim-poana, fehin-tsolomaso maimaim-poana, karatra fitsapana polarization maimaim-poana ary Maimaim-poana ny fandefasana!
Sizing: Frame Sakany: 5.75 santimetatra - Haavon'ny endriny: 1.75 santimetatra - Halavan'ny tempoly: 5.62 santimetatra.
Hankasitraka ny toro-hevitrao!
Regular vidiny $107.78 Mitsitsia $ -107.78
Sunglasses an'ny Club Skateboard Multi-Layer 100%, Black Lovia Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective ary CAT 3 Lens, Artisan Engraved, Eco-Friendly.
Ahitana: Sunglasses, Bambu Case, Microfiber Pouch maimaim-poana, lamba fanadiovana microfiber maimaim-poana, tady sunglass maimaim-poana ary karatra fitiliana polarization maimaim-poana.
Regular vidiny $81.38 Mitsitsia $ -81.38
Ny fijery amin'ireto solomaso solomaso ireto dia mitovy amin'ny fijerena amin'ny masolavitra volondavenona, ny lokonao dia tsy ho voadisoana amin'ny lantom-baovao mena / voasary.
Masoandro fitaratra amin'ny masoandro miaraka amin'ny volotsangana mainty sy boaty, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat 3 Lens, Eco-Friendly.